Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 20)
Renders waxay muujinayaan Google Pixel 3 XL madow, reexaan iyo cadaan
Waxyaabaha cusub ee Google Pixel 3 XL waxay muujinayaan saddexda midab ee suurtogalka ah ee qalabka leh naqshad aad u gaar ah
Xiaomi Redmi Xusuusin 6 Pro: Taleefanka cusub ee Xiaomi hadda waa rasmi
Xiaomi Redmi Xusuusin 6 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Soo ogow wax walba oo ku saabsan khadka dhexe ee cusub ee 'Xiaomi' oo laga heli karo Aasiya.
Vivo waxay ku dhawaaqeysaa jiilka 4-aad ee soo-bandhigayaasha faraha
Vivo waxay ku dhawaaqday jiilka afaraad ee akhristayaasha faraha ee shaashadaha iyo teknolojiyada cusub ee xawaaraha DSP, laga soo bilaabo gacanta Qualcomm.
Miyuu Apple Watch yahay smartwatch ugu fiican suuqa?
Taxanaha gaarka ah ee Apple Watch 4 wuxuu bixiyaa madax-bannaanida "ilaa" 18 saacadood, shaki la'aan batterigeeda weli waa ciribta Achilles
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo wicitaanka gudbinta ee Android
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo wicitaanka gudbinta moobilkaaga Android. Soo ogow talaabooyinka aad ugu adeegsan karto taleefankaaga.
Martiqaad xadaysa ayaa cadeyneysa in OnePlus 6T la soo bandhigi doono Oktoobar 17
Sawir xaday ayaa muujinaya casuumaadda munaasabadda daahfurka OnePlus 6T oo hadda waxaan ognahay in Oktoobar 17 ay noqon doonto taariikhda ay rasmi ahaan u noqonayso.
Sida loo qiyaaso dareemayaasha taleefankaaga Android
Sida loo qiyaaso dareemayaasha casriga casriga ah ee Android. Soo ogow hababka jira si aad u awood ugu yeelatid inaad si fudud ugu cabirto taleefankaaga Android.
Evan Blass wuxuu xaqiijinayaa naqshadeynta Google Pixel 3 iyo 3 XL ee abaalmarin cusub
Naqshadeynta Google Pixel 3 iyo 3 XL waxay ku muuqaneysaa abaalmarin cusub oo uu sii daayay Evan Blass. Raadi sida taleefannada soo socda ee shirkaddu noqon doonaan.
Shirkadda Kuuriya waxay diiwaangelisaa rukhsadda 'Samsung Buds' ee Yurub
Samsung Buds wuxuu noqon karaa headset wireless ah Bixby oo ah kaaliye shaqsiyeed. Dhamaan khamaarista ayaa daaran.
Kirin 980 ayaa ka sarreeya kan Apple ee A12 Bionic, sida ay sheegtay shirkadda Huawei
Shirkadda Huawei ee Kirinj 980 ayaa ka sarreeya Apple's A12 Bionic chipset, sida ay sheegtay shirkadda Shiinaha. Baro wax badan oo ku saabsan bayaanka sumaddan.
OnePlus 6T wuxuu ka muuqdaa sawirro dhab ah qaabkiisana waa la kashifay
OnePlus 6T wuxuu ka muuqday sawirro dhab ah, isagoo soo bandhigaya naqshadeeda Waterdrop. Soo ogow waxa xiga ee shirkaddu noqon doonto.
Maamuusku kama go'i doono Huawei
Ka dib warar xan ah oo ka soo baxay warbaahinta kala duwan ee Shiinaha, waxaa la xaqiijiyay in Honor iyo Huawei ay sii wadi doonaan sameynta hal koox ganacsi.
Bixinta Top Banggood - usbuuc ee Sebtember 24 illaa 30, 2018
Bixinta ugu fiican Banggood ee Sebtember 2018. Waxaa lagu cusbooneysiiyay dalabyada cusub ee usbuuca Sebtember 24 ilaa 30, 2018
Hadda waxaad ku haysan kartaa Oukitel WP2 kaliya 190 euro
Haddii aad qorsheyneyso inaad dib u cusbooneysiiso taleefankaaga casriga ah waxyar ka dib oo aad raadineyso moodel u adkeysanaya argagax, dhicitaan iyo biyo, Oukitel WP2 ayaa noqon kara nooca aad raadineyso.
Xiaomi horeyba waxay u bilaabatay inay shaaciso bilowga caalamiga ee Xiaomi Mi 8 Lite
Bilowga caalamiga ah ee Xiaomi Mi 8 Lite ayaa bilaabmaya in lagu dhawaaqo. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bilawga caalamiga ah ee taleefanka.
Ka dusay muuqaal cusub oo ah Huawei Mate 20
Fiidiyow cusub oo ka mid ah Huawei Mate 20 ayaa daadanaya. Soo ogow naqshada ugu dambeysa ee dhamaadka-sare ee sumcadda Shiinaha mahadsanid fiidiyowgan xaday.
Samsung Galaxy A7 (2018) ayaa toddobaadkan ka bilaabanaya Hindiya
Samsung Galaxy A7 (2018) ayaa berri laga bilaabayaa Hindiya. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilawga taleefanka kamarad-gadaal saddex-geesoodka ah ee Samsung.
LG G5 wuxuu bilaabaa helitaanka Android Oreo
Halyeeyga LG G5 wuxuu bilaabay inuu helo cusbooneysiinta muddada dheer la sugayay ee adeegsadayaal badani ka filayeen Android Oreo, oo ah cusbooneysiin horeyba looga heli jiray Kuuriya
Soo dejiso waraaqaha gidaarka ee Samsung Galaxy A7 cusub
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato daaqadaha cusub ee Samsung Galaxy A7, qodobkan waxaan ku tusaynaa sida loo soo dejiyo.
Astaamaha 'Oppo A7' oo Buuxa Ayaa La Soo Bandhigay: 6.2 ″ HD + Display, SD450 iyo More
Faahfaahinta farsamo ee Oppo A7 ayaa la helay. Baro wax badan oo ku saabsan shirkadda casriga ah ee soo socota ee waxqabadka hooseysa.
Noocyada cusub ee Huawei Y9 (2019) waxaa soo saaray TENAA
Huawei Y9 (2019) ayaa lagu daadiyey TENAA iyada oo qeexitaankeeda farsamo ee muhiimka ah. Ogow dhammaan faahfaahinta taleefankan soo socda.
Kuwani waxay noqon karaan qeexitaannada taleefannada casriga ah ee Samsung oo wata 4 kamaradood
Kuwani waxay noqon karaan qeexitaannada Terminaalka cusub ee Samsung soo bandhigi doonto Oktoobar 11 oo leh 4 kamarad
Galaxy A9 Pro wuxuu lahaan lahaa afar kamaradood oo gadaal ah
Noocyada ugu horreeya ee Galaxy A9 Pro ayaa soo ifbaxay.Faahfaahin dheeraad ah ka hel taleefanka cusub ee Samsung oo wata afar kamaradood oo gadaal ah.
Xiaomi Mi 8 Pro ayaa dhawaan laga bilaabi doonaa meel ka baxsan Shiinaha
Xiaomi Mi 8 Pro ayaa laga bilaabi doonaa meel ka baxsan Shiinaha si rasmi ah. Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha.
Geekbench wuxuu faahfaahinayaa qeexitaano kala duwan oo ka mid ah Realme 2 Pro
Realme 2 Pro ayaa laga sii daayay Geekbench. Wax ka baro faahfaahinta la helay ee shirkadda rasmiga ah ee soo socota ee diiradda saareysa suuqa Hindiya.
Bandhigga Nokia 7.1 Plus ayaa ka muuqda fiidiyowga waxayna muujineysaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qaabkeeda
Naqshadda 3D ee Nokia 7.1 Plus ayaa lagu sifeeyay muuqaal-bixiye. Baro qalabka soo socda ee sumadda.
Beta-ka labaad ee Android Pie wuxuu ku yimaadaa taleefannada cusub ee Huawei
Qalabkan cusub ee loo yaqaan 'Android Pie beta' ayaa ku soo socda Huawei iyo Honor phones. Raadi wax badan oo ku saabsan beta-ka cusub ee keena hagaajinta iyo shaqooyinka cusub.
Shaandheeyay dhowr qeexitaanno ah Lenovo Z5 Pro, oo ah calanka xiga ee shirkadda
Dhowr ka mid ah qeexitaannada farsamo ee Lenovo Z5 Pro ayaa la xaday. Ka baro wax walba oo ku saabsan casriga soo socda shirkadda.
OnePlus 6 wuxuu horey u haystay Android 9.0 Pie hab deggan
OnePlus 6 wuxuu horey u cusbooneysiiyay Android 9.0 Pie, oo ah nooca ugu dambeeyay ee nidaamka hawlgalka Google. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta.
Huawei waxay u fidisaa batari dib loo soo celin karo dadka safka ugu jira inay iibsadaan iPhone XS
Soo-saaraha Aasiya ee Huawei ayaa ka faa'iideystay safafka caadiga ah ee Dukaanka Apple si uu u siiyo 200 oo batteri oo dib loo soo celin karo 10.000 mAh baytariyada
Xiaomi Mi 5s Plus wuxuu horey u helayaa Android 8.0 Oreo
Xiaomi Mi 5s Plus wuxuu helayaa Android 8.0 Oreo mahadnaqa cusboonaysiinta cusub. Ogow dhammaan faahfaahinta.
Pocophone F1 wuxuu helaa cusbooneysiinta firfircoonida wejiga furitaanka
Mid ka mid ah boosteejooyinka xiddiglaha bilihii la soo dhaafay, Pocoph9ne F1, ayaa hadda helay cusbooneysiin firfircoon furitaanka wejiga.
Telefoonka ugu horreeya ee 5G ee Huawei wuxuu noqon doonaa laablaab
Telefoonkii ugu horreeyay ee Huawei oo leh 5G wuxuu noqon doonaa laablaab. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefankan nooca Shiinaha ee suuqa ku dhacay bartamaha-2019.
Nokia 7 Plus waxay si rasmi ah uheshaa Nolosha Dijital ah
Nokia 7 Plus hadda waxay soo dejisan kartaa Digital Wellbeing. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan codsigan soo gaadha taleefanka shirkadda marka hore.
Asus ROG Telefoonku wuxuu imaan lahaa Oktoobar
Taleefanka Asus ROG wuxuu ka bilaabmi doonaa Yurub dhammaadka Oktoobar. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilawga taleefankan Yurub.
Nokia waxay soo bandhigi doontaa taleefankeeda cusub bisha Oktoobar 4
Nokia waxay soo bandhigi doontaa taleefankeeda cusub bisha Oktoobar 4. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan telefoonka cusub ee shirkaddu si rasmi ah u soo bandhigeyso.
Xiaoai Smart Alarm Clock, Xiaomi saacaddeeda digniinta casriga ah oo kayar 20 euro
Xiaomi waxay soo saartay qalab cusub oo xad dhaaf ah. Waxaan ka hadlaynaa Xiaoai Smart Alarm Clock, saacadda cusub ee digniinta smart Xiaomi.
Meizu ma furi doono taleefanka casriga ah ee 5G sanadka soo socda
Sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay ee agaasimaha guud ee shirkadda Meizu, shirkadda Shiinaha ma soo saari doonto taleefan casri ah oo awood u leh inuu taageero shabakadda 5G sanadka soo socda.
Wuxuu xaday naqshada iyo qeexitaanka Nokia 7.1 Plus
Nokia 7.1 Plus: Naqshadaynta Qarsoon iyo Qeexitaannada. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan calaamaddan cusub ee heerka dhexe ah ee suuqa ku soo dhowaan doonta.
TOP waxay bixisaa LightInTheBox
TOP waxay siisaa LightInTheBox dalabyada ugufiican ee bisha Sebtember 2018. Raadi waxbadan oo ku saabsan dalabyada aan ka helno dukaanka caanka ah ee aad ka iibsan karto taleefannada casriga ah, kiniiniyada, laptops, kiisaska, agabyada iyo aalado kale oo badan oo qiimo weyn leh. Dalabyo aad u wanaagsan oo saacadihii ugu dambeeyay soo maray oo waa inaad hadda ka faa'iideysataa. GALO!
Waxaa soo ifbaxay qeexitaanno farsamo oo kala duwan oo ah LG V40 ThinQ
Waxaa soo ifbaxay qeexitaanno farsamo oo kala duwan oo ah LG V40 ThinQ. Ku hel waxa ay shirkadda Kuuriyada Koonfureed noogu diyaarisay taleefankan.
Xiaomi Mi 8 Lite ayaa laga bilaabi doonaa meel ka baxsan Shiinaha
Xiaomi Mi 8 ayaa laga bilaabi doonaa suuqyada caalamiga ah. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista taleefankan suuqyada cusub ee ka baxsan Shiinaha.
Ogeysiiskii ugu horreeyay ee OnePlus 6T waa kan
Soo bandhigtay ogeysiis rasmi ah oo rasmi ah ee OnePlus 6T. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaanta dhammaadka sumcadda iyada oo ay ugu wacan tahay xayeysiinkeedii ugu horreeyay ee TV-ga.
Galaxy A7 2018: Samsung kii ugu horreeyay oo wata saddex kamaradood oo gadaal ah
Samsung Galaxy A7 2018: Caddaymaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax badan oo ku saabsan Samsung-kii ugu horreeyay oo leh saddex kamaradood oo gadaal ah.
Google Home Mini waa afhayeenka ugu iibinta badan suuqa
Google Home Mini wuxuu hogaamiyaa suuqa kuhadalka smart smart. Ka ogow wax badan oo ku saabsan iibka ku hadla Google adduunka oo dhan.
Hadda waa suurtagal in lagu xiro badhanka Bixby Galaxy Note 9
Waad joojin kartaa badhanka Bixby ee ku yaal Galaxy Note 9. Soo ogow sida aad u joojin karto badhanka kaaliyaha qaybta sare ee shirkadda.
Nokia waxay ku shaqeysaa taleefan lagu ciyaaro
Shirkadda HMD Global waxay ka shaqeyneysaa taleefan casri ah oo loogu talagalay cayaaraha. Waxbadan ka baro qorshayaasha Nokia.
Telefoonkii ugu horreeyay ee Huawei oo leh 5G taageero ayaa imanaya sanadka soo socda
Huawei waxay soo saari doontaa taleefan 5G ah bartamaha sanadka 2019. Faahfaahin intaas ka badan oo ku saabsan bilaabista taleefankan saxiixa ah Kirin 980.
Meizu V8 iyo V8 Pro, isdhaafsiga dhaqaale ee cusub ee shirkadda Shiinaha
Meizu waxay soo bandhigtay laba aaladood oo dhexdhexaad ah: Meizu V8 iyo V8 Pro. Ogow dhammaan qeexitaanadooda farsamo, astaamaha iyo qiimahooda.
Xiaomi Mi 8 Pro: Qaabka cusub oo leh aalad faro-qaadis ah oo lagu dhex daray shaashadda
Xiaomi Mi 8 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi dhammaan waxyaabaha ku saabsan dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha si rasmi ah loo soo bandhigay maanta.
Xiaomi Mi 8 Lite: Xiaomi bartamihiisa-dhexe
Xiaomi Mi 8: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee Xiaomi maanta daaha laga rogay.
Meizu X8 ayaa la bilaabay: 6.2-inch FHD + panel, Snapdragon 710 iyo in ka badan
Meizu X8 waa rasmi. Baro wax walba oo ku saabsan moobilka cusub ee shirkadda oo leh processor octa-core Snapdragon 710 oo ka socda Qualcomm.
Xiaomi waxay ka shaqeysaa seddex telefishan oo leh TV-ga Android
Xiaomi waxay soo saari doontaa seddex telefishan oo leh TV-ga Android. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan moodooyinka cusub ee shirkadda ee dhowaan imaan doona Yurub.
Meizu 16X: Qiyaasta cusub ee heerka dhexe ah ayaa hada rasmi ah
Meizu 16X: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Soo hel dhammaan wixii ku saabsan taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha ee si rasmi ah maanta loo soo bandhigay.
Snapdragon 835 ma adeegsan doonaa Razer Phone 2?
Razer Phone 2 wuxuu u isticmaali lahaa Snapdragon 835 processor ahaan. Raadi wax badan oo ku saabsan telefoonka cusub ee shirkadda ee processor-kii sanadkii hore isticmaali lahaa.
Samsung waxay soo bandhigi laheyd wadar ahaan afar Galaxy S10
Samsung ayaa soo bandhigi doonta afar nooc oo ka mid ah noocyada Galaxy S10. Raadi wax badan oo ku saabsan taleefannada ku jiri doona noocyadan shirkadda Kuuriya ah.
Kuwa Sameeya Telefoonada Kasbashada Sare ee Q2018 XNUMX
Daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday kuwaas oo ah shirkadaha helay faa iidada ugu badan rubuckan labaad ee sanadka. Waxaan ku siinaynaa dhammaan faahfaahinta.
Maamulaha shirkadda Xiaomi wuxuu xaqiijinayaa laba nooc oo ah Mi 8 Youth oo leh gradient
Dhawr maalmood ka dib markii la bilaabay, barnaamijka Xiaomi Mi 8 Lite, oo sidoo kale loo yaqaan Mi 8 Daabacaadda Dhallinyarada, ayaa ...
Shaandheeyay sawirradii ugu horreeyay ee rasmiga ah ee Google Pixel 3
Sawiradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Pixel 3 horey ayaa loo soo daadiyey. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta taleefannada cusub ee Google.
Samsung Galaxy J4 + iyo Galaxy J6 + durba waa rasmi
Samsung Galaxy J4 + iyo Galaxy J6 +: Tilmaamaha Rasmiga ah. Raadi wax walba oo ku saabsan labada nooc ee cusub ee shirkadda Kuuriya horay u ahayd rasmi.
Realme waxay u dabaaldegaysaa hal milyan oo unug oo telefoonno ah oo laga iibiyay Hindiya
Realme ayaa shaacisay inay Hindiya ka iibisay hal milyan oo unug oo taleefannada casriga ah. Tirooyinka waxaa ka mid ah Realme 1 iyo 2.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro ayaa ka muuqda Aliexpress oo leh sawiradeeda, qeexitaankeeda iyo qiimaheeda
Xiaomi Redmi Note 6 Pro wuxuu ka soo muuqday Aliexpress oo ay weheliso dhammaan qeexitaankiisa farsamo. Ogow wax walba oo ku saabsan taleefankan.
Galaxy S8 wuxuu helayaa Emoji iyo howlaha gaabiska-dhaqdhaqaaqa ee Galaxy S9 cusbooneysiintiisii ​​ugu dambeysay
Cusboonaysiinta cusub ee amniga ee Samsung Galaxy S8, waxay na siineysaa laba sheeko oo muhiim ah, kuwaas oo ka yimid gacanta Galaxy S9
Sida loo cusbooneysiiyo Xiaomi MIUI 10
Daahfurka Nokia 9 ayaa dib loo dhigi doonaa illaa Febraayo 2019
Bilaabashada Nokia 9 ayaa dib loo dhigay illaa 2019. Ogow wax badan oo ku saabsan daahitaanka daah-furka dhamaadka-sare ee shirkadda.
Samsung ayaa dhawaan tirtiri doonta baaxadda Galaxy J
Samsung waxay baabiin doontaa kala duwanaanta Galaxy J. Faahfaahin dheeraad ah ka ogow isbeddelada ay shirkadda Kuuriya ku soo bandhigi doonto taleefannadooda.
Motorola One Power waxaa laga bilaabi doonaa Hindiya 24-ka Sebtember
Motorola ayaa hadda ku dhawaaqday, iyada oo loo marinayo tweet, in Hal Power uu imaan doono Hindiya Sebtember 24. Soo ogow.
Huawei wuxuu xaqiijinayaa kamaradda laba jibaaran ee Mate 20 Pro
Xaqiijiyay: Huawei Mate 20 Pro wuxuu lahaan doonaa kamarad gadaal laba jibaaran ah. Raadi wax badan oo ku saabsan kamaradaha-dhamaadka sare ee Huawei.
The Honor Magic 2 ayaa la soo bandhigi doonaa dhammaadka Oktoobar
Honor Magic 2 waxaa si rasmi ah loo sii deyn doonaa Oktoobar 26. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha.
Samsung way joojin doontaa inay noqoto soosaaraha kaliya ee shaashadda OLED ee iPhones
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ma noqon doonto shirkadda kaliya ee soosaari doonta qalabka OLED ee moodooyinka cusub ee iPhone-ka.
Telefoon sharaf cusub ayaa ku dhow inuu suuqa soo galo
Taleefan sharaf cusub ayaa laga diiwaangeliyey keydka xogta TENAA. Baro wax badan oo ku saabsan qeexitaannada farsamo ee moobilka soo socda.
Xaqiijiyay: OnePlus 6T wuxuu macsalaameyn doonaa 3.5mm Jack isku xiraha codka, sida ku xusan kiiskiisa
Kiiskii dhowaa ee la kashifay ee OnePlus 6T wuxuu xaqiijinayaa in dhamaadka sare uusan lahaan doonin 3.5mm Jack Audio xiriiriye.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ayaa heli doonta MIUI 10 dhamaadka bisha
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition wuxuu heli doonaa MIUI 10 bishaan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefankaaga noocaan ah lakabka Shakhsiyeynta.
Qalabka Android wuxuu u yimaadaa Samsung Galaxy S6 gacanta saddexaad
Haddii aad tahay milkiilaha Samsung Galaxy S6, nasiib ayaad ku jirtaa. ROM ayaa la sii daayay si loogu cusbooneysiiyo Android Pie.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro mar kale ayaa la sifeeyay, markan, oo leh liistada qeexitaanka
Liiska faahfaahinta ee Xiaomi Redmi Note 6 Pro ayaa la xaday. Baro dhammaan wixii ku saabsan casriga soo socda shirkadda Shiinaha.
Vivo V11 Pro waxay heshaa cusbooneysiin u oggolaaneysa inay duubto fiidiyowga 4K
Vivo V11 Pro waxay heleysaa cusbooneysi cusub oo u oggolaanaya inay duubto fiidiyowga xallinta 4K. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta.
Sida loo soo dejisto loona adeegsado maqaarka daawashada bilaashka ah Amazfit-kaaga
Saacadda cusub ee Xiaomi ee leh NFC, dareeraha garaaca wadnaha iyo waxyaabo kale oo badan ayaa imanaya
Huami Amazfit Verge waa Xiaomi's smartwatch kaas oo ku sii nagaan doona Shiinaha hada. Saacad leh dareemaha garaaca wadnaha iyo NFC.
Qaraxyada Galaxy Note ayaa kusoo laabanaya suuqa. Hadda waxay ku jirtaa Xusuusin 9
Jiilka cusub ee kala duwanaanshaha Xusuusin, Xusuusin 9, wuxuu la kulmay kiiskii ugu horreeyay ee qarax, bil kadib markii si rasmi ah loo soo bandhigay.
Galaxy J4 + iyo J6 + ayaa ka muuqda websaydhka Samsung
Galaxy J4 + iyo J6 + ayaa ka soo muuqday markii ugu horeysay shabakada Samsung. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefannadan oo la soo saaray Sebtember 25.
Xiaomi Mi 8 oo leh shaashada sawirka shaashadda ayaa imaan doonta toddobaadkan
Xiaomi waxay soo saari doontaa Mi 8 oo leh shaashad shaashadda shaashadda ah. Raadi wax badan oo ku saabsan qaabkan oo si rasmi ah loo soo bandhigi doono toddobaadkan.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro wuxuu lahaan lahaa afar kamarad
Xiaomi Redmi Note 6 Pro waxay lahaan doontaa afar kamarad. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee Xiaomi ee dhowaan soo socda.
Galaxy A9 Pro wuxuu u isticmaali lahaa Snapdragon 710 processor ahaan
Galaxy A9 Pro wuxuu lahaan doonaa processor Snapdragon 710. Ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan processor-ka ay shirkadda Kuuriya ka doorato taleefankeeda cusub.
Taleefanka casriga ah ee Galaxy Note 9 ayaa laga bilaabi doonaa 30 dal
30 dal ayaa heli doona Galaxy Note 9 oo qalin ah. Ka ogow waxbadan oo ku saabsan soosaarida Samsung-dhamaadka sare ee midabkeeda cusub.
Pocophone F1 ayaa cusbooneysiin doona Android Pie dhawaan
Qalabka Android wuxuu u imanayaa Pocophone F1 dhowaan. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta dhowaan ku soo socota taleefanka astaanta Shiinaha.
Galaxy S10 ayaa yeelan doonta naqshad ka duwan tii hore sida uu sheegay madaxa shirkadda Samsung
Galaxy S10 ayaa soo bandhigi doonta nashqad ka duwan tii hore. Soo ogow xaqiijinta Agaasimaha Guud ee Samsung qaabeynta taleefannada cusub ee shirkadda.
Sifeeyay astaamaha Moto G7 iyo G7 Plus
Astaamaha Moto G7 iyo G7 Plus ayaa xaday. Raadi wax badan oo ku saabsan astaamaha labada taleefan ee cusub ee imanaya sanadka 2019.
MIUI 10 wuxuu yimid Mi 5, Mi 6, Mi Mix 2 oo ka mid ah taleefannada kale
Nooca caalamiga ah ee MIUI 10 wuxuu yimaadaa taleefannada ugu horreeya ee Xiaomi. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ballaadhinta noocyadan lakabka u-habeynta.
Laba taleefan oo cusub oo Huawei ah ayaa ku daatay TENAA
Laba taleefannada casriga ah ee Huawei ayaa ka diiwaangashan TENAA. Soo ogow waxa ay shirkad shiinuhu noo diyaarisay.
Xiaomi ayaa ku jeesjeesa Apple adoo seddex xirmo ku daraya bakhaarkooda isla qiime la mid ah kan iphone-yada cusub
Xiaomi waxay siineysaa Apple dharbaaxo cad oo gacmo gashi ah iyadoo ku siineysa xirmo alaabteeda ah qiimo la mid ah iPhone-yada cusub iyo isla magaca.
Razer Phone 2 waxaa la soo bandhigi doonaa Oktoobar 10
Razer Phone 2 waxaa la soo bandhigi doonaa 10-ka Oktoobar. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida jiilka cusub ee casriga casriga ah.
Meizu 16X wuxuu la imaan doonaa Sony IMX380 iyo dareemayaal IMX350 oo wata teknolojiyadda ArcSoft
Fariin rasmi ah oo cusub oo Meizu 16X ah ayaa muujineysa inay soo bandhigi doonaan dareemayaasha Sony IMX380 iyo IMX350 oo leh teknolojiyad ArcSoft ah oo loogu talagalay kobcinta sawirka.
Blackview BV9600 Plus waa rasmi: astaamaha cusub ee qalfoofka sare leh
Blackview waxay ka dhigtay Blackview BV9600 Plus rasmi ah, sumadda cusub ee sumadda. Ogow dhammaan astaamaheeda.
Shaandhayn cusub oo Pixel 3 ah waxay muujineysaa suurtagalnimada moodel leh midabka aqua mint
Teaser cusub ayaa soo saartay Google si aad u ogaatid midabka saddexaad ee muranka Pixel 3: biyaha mint.
IPhone XS wuxuu ku helaa dhibco aan caadi aheyn Antutu: way ka sarreysaa tan Android kasta
IPhone XS-ka cusub waxaa lagu tijaabiyay Antutu wuxuuna helaa qiimeyn layaableh. Baro wax badan oo ku saabsan natiijooyinka ay gaareen taleefanka cusub ee Apple.
Oppo waxay leedahay seddex taleefano cusub oo kuwa dhexe ah oo noo diyaarsan
Oppo waxay ka diiwaan galisay sadex taleefan oo cusub casriga keydka TENAA. Soo ogow waxa ay shirkad shiinuhu noo diyaarisay.
Nokia 3.1 wuxuu bilaabaa helitaanka Android 8.1 Oreo
Nokia 3.1 wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android 8.1 Oreo. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta bilaabeysa inay ku soo degto taleefankan.
Kuwani waa qiimaha iPhone Xs iyo XS MAX leh Orange. Soo ogow qiimaha ay yeelan doonaan qiimaha cusub ee taleefannada Apple ay yeelan doonaan.
Sharafta Muuqaalka 10 ayaa durbaba qaata GPU Turbo
'Honor View 10' wuxuu helayaa cusbooneysi cusub, oo tiknoolajiyadda GPU Turbo ay timaaddo. Wax badan ka baro noloshan cusub.
Waxaa jiri doona nooc dahabi ah oo ka tirsan Xiaomi Mi 8 Youth
Xiaomi Mi 8 Youth sidoo kale waxaa lagu bilaabi doonaa dahab. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan nooca cusub ee taleefanka sumadda Shiinaha ee imanaya toddobaadkan.
Samsung waxay soo bandhigeysaa taleefanka Quad Camera-ka bisha Oktoobar 11
Taleefanka Samsung oo wata afar kaamiro ayaa imaan doona 11-ka Oktoobar. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda taleefankan la soo bandhigi doono.
Samsung Galaxy Note 8 wuxuu helaa cusbooneysiin cusub: wuxuu helayaa Super Slow-Motion iyo AR Emojis
Samsung Galaxy Note 8 wuxuu helayaa cusbooneysi cusub oo lagu taageerayo duubista Super Slow Motion iyo AR Emojis. Waxaan ku siinaynaa faahfaahinta.
Moto Mod oo wata kumbuyuutar loogu talagalay Moto Z ayaa la joojiyay
Moto Mod oo wata kumbuyuutarka Moto Z ayaa la joojiyay. Waxbadan ka ogow sababaha mashruucan loo joojiyay.
Telefoonka la laaban karo ee Huawei wuxuu imanayaa 2019
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa taleefankiisa isku laabma suuqa sanadka 2019. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka saxiixan ee suuqa.
Isbarbardhiga u dhexeeya iPhone XS, iPhone XS Max, Galaxy Note 9, Galaxy S9 + iyo Huawei P20 Pro,
Jiilka cusub ee iPhone-ka ee la soo bandhigay Sebtember 12, wuxuu nagu qasbayaa inaan isbarbardhig ku sameyno Android-ka sare ee hadda jira
OnePlus 6T ma lahaan doono 3.5mm maqal maqal ah
Ma jiri doono 3.5mm Jack Jack oo maqal ah oo ku yaal OnePlus 6T. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sababaha maqnaanshaha dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha.
Sony Xperia XZ3 hadda waa laga sii ballansan karaa Spain
Hadda waxaa suurtagal ah in lagu keydiyo Sony Xperia XZ3 Spain. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan boos celinta qaybta sare ee shirkadda Japan.
Samsung iyo Google waxay ka wada shaqeeyaan barnaamijyada fariimaha degdegga ah
Samsung iyo Google waxay la dagaallamayaan barnaamijyada farriimaha la isugu diro. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan midowga labada shirkadood arimahan.
LG V40 waxaa la soo bandhigi doonaa Oktoobar 4
LG wuxuu LG V40 ku soo bandhigi doonaa 4ta Oktoobar Koonfurta Kuuriya. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida ee noocyada cusub ee dhammaadka-dhamaadka ah.
Nooca ugu horumarsan ee Samsung Galaxy S10 wuxuu la imaan doonaa kamarad gadaal seddex laab ah
Xog cusub ayaa soo jeedineysa in Samsung Galaxy S10 uu ku imaan doono seddex nooc oo kala duwan, midkoodna leh saddex kamaradood. Waxbadan ka baro xaqiiqadan suuragalka ah.
Honor 8X wuxuu imaan doonaa 11-ka Oktoobar Yurub
Sharafta 8X waxaa lagu soo bandhigi doonaa Oktoobar 11 magaalada Prague. Ka ogow imaatinka taleefanka sharafta suuqa Yurub bisha soo socota.
Telefoonka Asus ROG waxaa si rasmi ah loo bilaabay: taleefan ciyaar oo dhan leh Snapdragon 845
Taleefanka Asus ROG waxaa laga bilaabay Shiinaha. Baro dhammaan waxyaabaha ku saabsan astaamaheeda, qiimaha iyo helitaanka suuqa Aasiya.
Xiaomi waxay saxiixday inaysan iibinaynin taleefannada casriga ah oo leh qiime ka sarreeya $ 699
Isaga oo raadinaya in uu noqdo shirkad astaan ​​u ah adduunka taleefanka, shirkadda Aasiya ee Xiaomi waxay cadeyneysaa in aysan ku iibin doonin taleefan casri ah qiimo ka sarreeya $ 699.
Huawei Watch GT iyo Honor Watch waa la caddeeyay
Huawei Watch GT iyo Honor Watch ayaa laga aqoonsan yahay Yurub. Ka ogow wax badan oo ku saabsan labadan saacadood ee cusub sumadda Shiinaha
Meizu 16X waxaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 19
Rasmi: Meizu 16X ayaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 19. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabida taleefankan cusub ee cusub.
Xaqiijiyay Xiaomi Mi 8 Dhallinyar leh shax leh
Nooc ka mid ah Xiaomi Mi 8 Youth oo wata gradient ayaa la soo saari doonaa. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nooca taleefanka cusub ka raadi sumadda Shiinaha.
Maamuus si aad u bilowdo taleefankeedii 5G ee ugu horreeyay sanadka 2019
Honor wuxuu bilaabi doonaa taleefankiisii ​​ugu horreeyay oo leh taageerada 5G ee 2019. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka ugu horreeya ee soo saaraha Shiinaha ee leh 5G.
Google wuxuu ku soo bandhigi doonaa Pixel 3 sidoo kale Paris
Google Pixel 3 ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa magaalada Paris bisha Oktoobar 9. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda taleefanka cusub ee bilaabmaya.
Kala saarida taleefoonada oo leh saamiga ugu wanaagsan ee qiimaha suuqa, ee AnTuTu
AnTuTu waxay sameysay daraasad taleefoonada ugu qiimaha badan waxqabadka suuqa kala saarayaan, iyadoo lagu saleynayo qiimahooda.
Meizu 16X ayaa la soo bandhigi doonaa berri: tani waa wax walba oo aan ka rajeyneyno taleefanka cusub
Meizu 16X ayaa la shaacin doonaa berri. Soo hel waxa shirkadda Aasiya ay noogu diyaarisay taleefankan cusub ee dhexdhexaadka ah.
Da Vinci waa magaca gudaha ee Galaxy Note 10
Samsung horeyba way ushaqeyneysaa, sida lafilayo, Galaxy Note 10, terminal lagu baabtiisay Da Vinci, oo ah magac gudaha ah
Chuwi Hi9 PRO dib u eegis video. Hadda waxaa lagu iibinayaa wax ka yar € 120 !!
Muuqaalka cusub ee cajiibka ah ee MIUI 10: ku nadiifi WhatsApp toosh si aad u badbaadiso booska
Nadiifinta WhatsApp-ka macnaheedu waa in la tirtiro dhammaan tiradaas badan ee xogta kaydinta laga soo qaaday sawirrada, xusuus-qorrada codka, fiidiyowyada, iyo in ka badan.
Vivo Y97 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Shiinaha
Vivo Y97 ayaa hadda laga bilaabay Shiinaha. Ka baro wax walba oo ku saabsan casrigaan cusub ee dhexdhexaadka ah ee processor-ka Helio P60 ee Mediatek.
Huawei Y9 (2019) waxaa lagu sifeeyay TENAA qaabkeedana waa la kashifay
Huawei Y9 (2019) ayaa hadda laga sii daayay TENAA, oo ah hay'adda Shiinaha. Soo hel waxa shirkadda Aasiya ay noo diyaarisay sannadka dambe.
Kaamirada Galaxy Note 9 ayaa ah tan labaad ee ugu fiican suuqa sida uu sheegayo DxOMark
Ragga ku jira DxOMark waxay mar horeba falanqeeyeen Galaxy Note 9 cusub, oo ah terminal u degay booska labaad ee kamaradda ugu fiican ee casriga ah
Fiidiyowga Huawei: Adeegga qulqulka ayaa yimid Spain
Fiidiyowga Huawei: Adeegga cusub ee socodka ee shirkadda Huawei. Ka raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan barnaamijkan gundhigga ah ee sumadda Shiinaha horay u soo bandhigtay.
Samsung Galaxy J6 + iyo Galaxy J4 + oo dhawaan lagu dhawaaqi doono
Samsung ayaa soo bandhigi doonta dhawaan Galaxy J6 + iyo Galaxy J4 +. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaanshaha labada taleefan ee cusub ee shirkadda.
Taleefanka Samsung ee laaban karo lama soo bandhigi doono bisha Nofembar
Samsung ma soo bandhigi doonto taleefankeeda isku laabma bisha Nofeembar. Maamulaha guud ee shirkada ayaa xaqiijiyay in taleefanka aan la soo bandhigi doonin sanadka 2018.
Xiaomi Mi 8 Youth waxaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 19
Xiaomi Mi 8 Youth waxaa la soo bandhigi doonaa Sebtember 19. Raadi wax badan oo ku saabsan soo bandhigida taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha.
Snapdragon Wear 3100: processor-ka cusub ee loo yaqaan 'Wear OS'
Snapdragon Xidho 3100: processor-ka loogu talagalay Wear OS-ka ayaa daawanaya. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan processor-kan cusub ka raadi sumadda horay loo soo bandhigay.
OnePlus 6T waxaa la soo bandhigi karaa Oktoobar 17
OnePlus 6T waxaa la soo bandhigi doonaa Oktoobar 17. Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda la soo bandhigi doono dhammaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha.
Google ma soo bandhigi doonto smartwatch cusub sanadkaan
Inbadan waxay ahaayeen wararka xanta ah ee kuwareegsan Android Wear, hadda WearOS, sanadka oo dhan. Taasi haddii Google ay damacsan tahay inay barafoobaan barxadda iyo shirkadda raadinta ee internetka ayaa xaqiijisay inaysan soo bandhigi doonin saacad casri ah sannadkan.
Samsung Galaxy J5 Prime wuxuu durbaba helayaa Android 8.0 Oreo
Samsung Galaxy J5 Prime wuxuu durbaba helayaa Android 8.0 Oreo. Ka baro wax badan oo ku saabsan faafitaanka noocyadan nidaamka hawlgalka ee Google.
Oppo A7X waa rasmi: 6.3-inch FullHD + shaashad, Helio P60 SoC iyo in ka badan
Oppo A7X waa rasmi. Ka baro faahfaahinta farsamada iyo astaamaha casriga casriga cusub shirkadda Shiinaha.
Moto G7 ayaa lagu sifeeyay qaab bixintiisa iyo nashqadeeda oo la muujiyay [Muuqaal]
Muuqaalka fikradda ah ee Moto G7 ayaa hadda la sii daayay. Waxay faahfaahin ka bixinaysaa dhammaan naqshadeeda oo noqon doonta mid ku xigta Moto G6.
Shaashadda Xiaomi Redmi Note 6 waa la dusiyay: 6.18 ″ guddi leh darajo
Gudiga iyo ilaaliyaha Xiaomi Redmi Note 6 waa la sii dayn lahaa. Tani waa 6.18 inji oo waxay leedahay darajo. Soo ogow!
Xiaoxun Children Smartwatch S2, smartwatch jaban oo loogu talagalay carruurta
Xiaoxun Children Smartwatch S2 waxaa laga bilaabay Shiinaha. Wax walba ka baro smartwatch-kan cusub ee jaban ee loo sameeyay carruurta.
Dhalinyartii Xiaomi Mi 8 gabi ahaanba waa la dusiyay
Sifeeyay naqshadeynta iyo qeexitaannada Xiaomi Mi 8 Youth. Raadi wax badan oo ku saabsan xubinta cusub ee qoyska Xiaomi Mi 8.
Shaandheeyay muuqaal cusub oo ah Huawei Mate 20 Pro
Sawir cusub oo la sifeeyay ee Huawei Mate 20 Pro. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow sawirka cusub ee la helay ee dhammaadka dhammaadka sumadda Shiinaha ee timaadda Oktoobar.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition wuxuu yeelan doonaa magac kale oo ka baxsan Shiinaha
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ayaa magaciisa ka beddeli doona meel ka baxsan Shiinaha. Ka ogow wax badan oo ku saabsan magaca cusub ee dhammaadka-sarreeya ee suuqyada kale.
Telefoon casri ah oo cusub ayaa ku daatay TENAA: Vivo V1730EA
Vivo waxay umuuqataa inay diyaarinayso soosaar cusub oo soo socota, maadaama qalab ay leedahay shirkadan ay hada kasoo muuqatay TENAA. Baro taas!
Motorola waxay bilaabaysaa inay ku tijaabiso Oreo Moto G4 Plus dhowaan. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka Android Oreo taleefanka.
Qeexitaanno farsamo iyo soo dejisan Oppo A7X, oo ah bartamaha xiga ee shirkadda
Oppo A7X ayaa lagu sii daayay qeexitaanno ay la socdaan qeexitaannadiisa farsamo. Wax dheeri ah ka baro bartamaha soo socda ee shirkadda Aasiya.
Razer Phone 2 wuxuu dhex socdaa AnTuTu sida dhamaadka-sare
Razer Phone 2 wuxuu maraa AnTuTu wuxuuna muujiyaa dhowr qeexitaankiisa farsamo. Soo hel waxa shirkaddu noo hayso.
Dhamaan aaladaha Samsung waxay yeelan doonaan sirdoon macmal ah sanadka 2020
Dhamaan aaladaha Samsung waxay isticmaali doonaan sirdoonka macmalka ah sanadka 2020. Faahfaahin intaas ka badan oo ku saabsan adeegsiga tikniyoolajiyaddan waxsoosaarka shirkadda wax ka ogaada.
HTC waxay la shaqeyneysaa Qualcomm's Snapdragon 855
Xogta ugu dambeysa waxay muujineysaa in HTC, shirkad laga leeyahay Taiwan, ay tijaabinayso Qualcomm Snapdragon 855. Waxbadan ka baro arintan.
Xiaomi waa ta labaad ee taleefan sameeye ee Indonesia
Xiaomi waxay isu taagtay inay tahay soosaaraha labaad ee casriga ah ee leh saamiga ugu badan ee suuqa Indonesia. Soo ogow!
ZTE Axon 9 Pro wuxuu ka muuqanayaa TENAA oo leh astaamo kala duwan
ZTE Axon 9 Pro wuxuu ku taxan yahay bogga shahaadada TENAA waxaana ku muuqda labo nooc oo leh astaamo kala duwan
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Razer Phone 2
Qeexitaannada ugu horreeya ee Razer Phone 2 waa la daadiyay.Faahfaahin intaa ka badan ka ogow astaamaha ugu horreeya ee casriga casriga ah ee lagu ciyaaro
Moto G5 iyo G5 Plus waxay bilaabayaan inay helaan Android Oreo
Android Oreo wuxuu bilaabaa inuu yimaado Moto G5 iyo G5 Plus. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka cusboonaysiinta taleefannadan sumadda leh.
Xiaomi M1808D2TE qarsoodi ah ayaa ku wareegaya agagaarka TENAA. Miyay noqon doontaa Mi 8 Dhallinyaro?
A Xiaomi oo leh nambarka "M1808D2TE" waxaa hadda caddeeyay TENAA. Wax walba waxay muujinayaan inay noqon karto Xiaomi Mi 8 Youth.
Meizu 16X waxaa laga dhaliyay AuTuTu guud ahaan heerka dhexe
Meizu 16X ayaa mar kale soo maray AnTuTu markale,. Shaandhayntan cusub, natiijada ay heshay terminal-ka ayaa la muujiyay. Baro taas!
Soo dejiso dekedda ugu dambeysa ee shaqeyneysa ee Google Pixel GCam ee Samsung Galaxy S9
Ugu dambeyntiina, nooca Exynos ee Galaxy S9 waxaa jira deked shaqeynaysa oo kuu oggolaanaysa inaad isticmaasho qaabka sawirka iyo HDR + 2017 ee Google Pixel.
Galaxy View 2 wuxuu maraa Wi-Fi Alliance iyo shahaadada Bluetooth SIG
Dhamaadkii bishii Agoosto, waxaan ka dhawaajinay war sheegaya in shirkadda Kuuriya ay ka shaqeyneyso jiilka labaad ee Samsung Galaxy View 2 jiilka labaad wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku dhufto suuqa, ka dib markii uu dhaafay laba shahaado oo muhiim ah oo si siman muhiim u ah.
OPPO Find X waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
OPPO Find X ayaa si rasmi ah maanta usoo gaadhay dalka Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo saarista taleefanka cusub ee Shiinaha ee Spain
Samsung ayaa bilaabi doonta nooc ka mid ah Galaxy S10 oo leh 5G
Samsung waxay ku shaqeysaa Galaxy S10 oo leh 5G taageero. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nooc-dhamaadka sare ee shirkaddu ay ka bilaabayso suuqa.
Furay muuqaal cusub oo ah nooca Nokia 9
Sawir cusub oo ka kooban shanta kamaradood ee Nokia 9 oo xaday. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan astaanta-dhamaadka sare iyo sumadda shan kamaradood oo gadaal ah.
Xiaomi Mi Band 3 ayaa laga heli karaa Spain laga bilaabo maanta
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Xiaomi Mi Band 3 gudaha Spain. Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahfurka jijimadda sumcadda Shiinaha Spain.
Waxyaabo dhowr ah oo muhiim ah oo ka tirsan Xiaomi Mi 8 Youth ayaa la sifeeyey
Xog xasaasi ah oo dhowaan soo baxday ayaa shaaca ka qaadday astaamaha farsamo ee muhiimka ah ee Xiaomi Mi 8 Youth. Ogow waxa Xiaomi noo diyaarisay.
Ciyaartii 'Moto P30 Play' ayaa gebi ahaanba ku daatay bogga Motorola
Gebi ahaanba waxaa lagu sifeeyay Moto P30 Play bogga Motorola. Raadi wax badan oo ku saabsan telefoonka cusub ee sumcadda suuqa ku soo dhacaya goor dhow.
Vivo X23 hadda waa rasmi: Heerka dhexe ee ugu sarreeya ee leh hoos u dhac ku yimid
Vivo X23: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Raadi wax walba oo ku saabsan taleefanka cusub ee nooca Shiinaha ee maanta la soo bandhigay.
Samsung Galaxy Watch ayaa hadda laga heli karaa Spain
Waxaa si rasmi ah loo iibinayaa Galaxy Watch dalka Spain. Raadi wax badan oo ku saabsan daahfurka saacadda cusub ee Kuuriya.
Amazon waxay soo bandhigeysaa kiniinkeeda cusub ee Fire HD 8, jiilka cusub ee wax soo saarka iibiya sida donuts
Amazon waxay hada soo saartay dabkeeda cusub ee loo yaqaan 'Fire HD 8. Kiniin u imanaya dhamaan noocyada jeebabka si loogu iibsado 99 euro.
Xiaomi ayaa weli ah nooca labaad ee ugu iibinta badan dharka la gashado
Xiaomi waa sumadda labaad ee ugu iibinta badan adduunka oo dhan. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan iibka sumadda Shiinaha ee qaybtan.
Samsung-kii ugu horreeyay ee leh shaashadda shaashadda shaashadda ayaa imaan doonta Oktoobar
Nooca ugu horreeya ee Samsung oo leh akhristaha faraha ayaa imaan doona Oktoobar. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka taleefankan saxiixa ah.
Sawirkii ugu horreeyay ee Nokia 9 wuxuu noo ogolaanayaa inaan aragno shan kamaradood oo gadaal ah
Waxaan horeyba u arki karnaa shanta kamaradood ee Nokia 9 markii ugu horeysay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan naqshadeynta nooca cusub ee dhamaadka-dhow ee dhowaan soo socda.
LG Q Stylus Plus waxaa laga bilaabay Hindiya iyadoo leh shaashad dhan 18-inch 9: 6.2
LG Q Stylus + ayaa hadda laga bilaabay Hindiya qiimahiisu waa 21.990. Ogow wax walba oo ku saabsan imaatinka qalabkan waddanka Hindiya.
Taleefanka Samsung ee laaban karo wuxuu lahaan lahaa laba shaashad
Telefoonka Samsung ee isku laaban ayaa soo bandhigi doona laba shaashadood. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka laaban karo oo laga helo shirkadda Kuuriya ee timaadda Nofeembar.
Honor 8X iyo 8X Max waxaa lagu soo bandhigay shaashado waa weyn iyo baytariyada waaweyn
Honor 8X iyo 8X Max hadda waa rasmi. Baro dhammaan waxyaabaha ku saabsan labadan aaladaha kala duwan ee cusub ee ka imanaya astaanta hadda lagu dhawaaqay.
Vivo V11 iyo V11i: astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee taleefannada cusub ee shirkadda
Vivo V11 iyo V11i ayaa hada lasoo bandhigay. Wax walba ka baro taleefannada casriga ah ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay.
Huawei P Smart +: cusub oo ka socda Huawei oo leh afar kamaradood oo ay ka buuxaan AI
Huawei P Smart + waa rasmi. Ogow dhammaan astaamaha iyo tilmaamaha farsamo ee xaruntan cusub ee Kirin 710.
Nubia Z18 waa rasmi: 5.99 ″ FullHD + bandhigay, Snapdragon 845 SoC iyo in ka badan
Nubia Z18 waxaa soo bandhigay shirkadda. Wax walba ka baro aaladan waxqabadka sare ee dhowaan lagu dhawaaqay.
Galaxy Note 5 iyo Galax S6 Edge + ayaa joojin doona helitaanka wararka billaha ah ee amniga
Shirkada Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa hada ku dhawaaqday in labada Galaxy Note 5 iyo Galaxy S6 Edge + labadaba aysan heli doonin wixii cusbooneysiin bille ah Cusboonaysiinta billaha ah ee Galaxy Note 5 iyo Galaxy S6 Edge ayaan run ahaantii ahayn.
Dhowr qeexitaan farsamo ee LG Q9 ayaa la soo daadiyey
Tilmaamo kala duwan iyo qeexitaanada LG Q9 ayaa la soo daadiyey. Ka baro waxbadan oo ku saabsan qalabkan oo dhawaan lasoo bandhigi doono.
Ciyaar sharafeed, kani waa ka go'an sharaf ee ciyaarta
Kani waa Sharafta Sharafta, Ballanqaadka xoogga leh ee sharafta qaybta ciyaarta, taas oo sidoo kale soo jiidata dareenka kuwa aan ciyaareynin.
Sony wuxuu sudhay Xperia XZ3 oo leh 6 GB oo RAM ah boggeeda rasmiga ah ee Taiwan
Sony ayaa shaaca ka qaaday in Xperia XZ3 ee Taiwan ay la socoto 6GB oo awood RAM ah. Waxbadan ka baro warkan goor dhow
Samsung waxay soo bandhigi kartaa taleefankeeda casriga ah ee isku laaban bisha Nofeembar ee sanadkan
Wax badan ayaa la sheegay, mala-awaal iyo warar xan ah oo ku saabsan sida ay u noqon karto taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee leh shaashad isku laaban suuqa, sharaf ay u tahay in wax walba laga helo Smartphone-kii ugu horreeyay ee isku laaban suuqa, wuxuu arki karaa nalka Nofeembar ee soo socota gacanta Samsung
Haa, ugu dhakhsaha badan waxaad awoodi doontaa inaad barkinta badhanka Bixby ee Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9 ayaa heli doonta cusbooneysiin cusub oo u oggolaan doonta adeegsadayaasheeda in ay joojiyaan badhanka Bixby si ay ugu sawiraan sida ay doonaan.
10-ka Telefoon ee ugu Awooda Badan Ogosto 2018, Sida uu sheegayo AnTuTu Benchmark
AnTuTu wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan bisha Ogosto ee sanadkan, taas oo ay ku jiraan Xiaomi Black Shark iyo kuwa kale.
Telefoonka Samsung ee isku laaban la soo bandhigi karo bisha Nofeembar
Samsung ayaa soo bandhigi doonta taleefankeeda isku laabma bisha Nofeembar. Ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka shirkadda Kuuriya sannadkan.
Huawei Mate 20 Lite ayaa imaan doona Spain Isbuuca soo socda
Huawei Mate 20 Lite waxaa laga bilaabi doonaa Spain 10-ka Sebtember. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan imaatinka taleefanka cusub ee Huawei ee Isbayn.
Huawei ma iloobin smartwatches, waxay raadineysaa inay wax soo saarto
Maamulaha guud ee Huawei ayaa sheegay in shirkaddu aysan ilaawin qaybta saacadaha casriga ah taa badalkeedana ay raadineyso inay abuurto tartan u qalma
Samsung ma bilaabi doontaa taleefan leh afar kamaradood oo gadaal ah?
Samsung waxay soo saari kartaa taleefan leh afar kamaradood oo gadaal ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefankan loo malaynayo nooca Kuuriya.
Waxaa la bilaabay kii ugu horreeyay ee Android 9.0 Pie beta furan oo loogu talagalay OnePlus 6
OnePlus wuxuu soo bandhigayaa Android 9.0 Pie beta furan oo loogu talagalay OnePlus 6. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilowga beta furan ee dhamaadka sare.
Qoraalka Motorola P30 ayaa la bilaabay: 6.2 ″ FHD + guddi leh darajo, SD636 iyo batari 5.000 Mah
Motorola P30 Note ayaa hadda laga bilaabay Shiinaha. Ka baro wax badan oo ku saabsan aaladda dhowaan la soo saaray ee heer-dhexaad ah.
Laba maalmood ka dib markii la bilaabay, Honor 8X wuxuu ku daatay TENAA
Sharafta 8X ayaa hadda laga sii daayay TENAA, hay'adda Shiinaha, markale. Baro wax badan oo ku saabsan waxa shaaca looga qaaday qalabkan.
Sony Xperia XZ3 hadda waa la heli karaa si loogu keydiyo Yurub
Waqtiga sii qabsiga ee Sony Xperia XZ3 wuxuu ka furmayaa Yurub. Dhamaadka sare ee sare ee Sony ayaa laga ilaalin karaa Yurub laga bilaabo maanta.
Nubia Red Magic 2 wuxuu la imaan doonaa Snapdragon 845 iyo badhamada geesaha kore
Nubia Red Magic 2 wuxuu la imaan doonaa Qualcomm Snapdragon 845 SoC iyo badhamada garbaha. Baro wax badan oo ku saabsan xogtan la shaaciyay dhowaan.
Ka faa'iideyso dib u soo celinta iskuulka ee ku yaal Amazon
Amazon: Dib ugu noqoshada iskuulka qiimo dhimista taleefannada iyo kiniiniyada. La soco badeecadaha ku jira dhiirrigelinta dukaanka munaasabadda ku noqoshada dugsiga
Samsung waxay siisaa shaashado isku laaban Xiaomi iyo OPPO
Xiaomi iyo OPPO waxay shaashadaha ka laabtaan Samsung. Waxbadan ka ogow iskaashiga labada shirkadood arimahan.
Meizu M8 wuxuu maraa TENAA wuxuuna muujiyaa astaamahiisa muhiimka ah
Meizu M8 wuxuu ku garaacay TENAA shaashad 5.7-inch HD + ah iyo processor-ka octa-core ee 2.0 GHz. Waan idin balaarinay.
Noocyada LG V40 ayaa xaday
Faahfaahinta LG V40 horey ayaa loo soo daadiyay. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qeexitaanka astaanta-dhamaadka sare ee cusub, horeyna u soo shaac baxday.
Qiimaha Sony Xperia XZ3 ayaa lagu muujiyay Yurub
Daaha ka qaaday qiimaha ugu dambeeya ee Sony Xperia XZ3 ee Yurub. Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha dhamaadka-sare ee shirkaddu ku yeelan doonto Yurub.
Telefoonada casriga ah ee cusubi aad ayey iskumid yihiin?
Miyaadan u maleyneynin in dhammaan taleefannada casriga ah ay aad isugu eg yihiin? Ogeysiis, laba kamarad ... Miyaanay ahayn wakhtigii shirkad qaata ay halista u abuureyso wax ka duwan?
EMUI 9-based Android Pie beta waxay u timaadaa Huawei iyo Honor
Telefoonada ugu horreeya ee Huawei iyo Honor waxay horey u haysteen qalabka 'Pie beta'. Soo ogow noocyada horeyba u haysta beta-kan EMUI 9.
Google ma sii deyn doonto Pixel Watch sanadkan
Google ee Pixel Watch ma soo saari doono sanadkan. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sababaha uusan Google Watch u daah furi doonin sanadka 2018.
ZTE waa taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee 5G ee soo baxa dhammaadka 2019
ZTE wuxuu bilaabi doonaa taleefankiisii ​​5G ee ugu horeeyay dhamaadka 2019. Ka ogow wax badan oo ku saabsan daahitaanka daahfurka qaabkan ee soo saaraha.
Lenovo si ay u bilaabaan taleefan kamarad lagala noqon karo
Lenovo waxay kaloo ka shaqeyneysaa taleefan kamarad lagala noqon karo. Soo ogow fikradda taleefankan uu Lenovo hadda ku shaqeynayo.
Samsung ayaa bilaabi doonta laba nooc oo ah Jilaalka J Prime dayrta
Samsung ayaa soo bandhigi doonta laba taleefon oo cusub oo loo yaqaan 'Galaxy J Prime' deyrta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taleefannada cusub ee taleefanka hoose.
Shirkadda Huawei P20 ayaa iibisay in ka badan 10 milyan oo unug
Huawei P20s wuxuu ka badan yahay 10 milyan oo unug oo la iibiyay. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka-dhamaadka sare ee Huawei adduunka oo dhan.
OnePlus wuxuu ka furi doonaa dukaankiisii ​​ugu horreeyay ee jireed Paris
OnePlus wuxuu ka furi doonaa dukaankiisii ​​ugu horreeyay ee jirka ah Yurub dhexdeeda magaalada Paris. Ka ogow wax badan oo ku saabsan bakhaarka sumadda Shiinaha ee caasimadda Faransiiska.
Shirkadda Sharp ayaa soo bandhigtay saddex taleefan si ay ugu noqoto Yurub
Sharp wuxuu soo bandhigayaa seddexdiisa taleefan cusub ee loogu talagalay Yurub. La soco taleefannada cusub ee sumadda Japan ee laga bilaabi doono Yurub.
Rasmi: Huawei wuxuu Mate 20 ku soo bandhigi doonaa Oktoobar 16 magaalada London
Shirkadda Huawei ayaa hadda ku dhawaaqday in Mate 20 iyo Mate 20 Pro lagu soo bandhigi doono Oktoobar 16 magaalada London. Soo ogow waxa shirkaddu noo diyaarisay.
Dib u eegista boorsada Mbuynow, USB iyo dekedda dhagaha
La kulan boorsada Mbuynow, oo ah shandad aad u casri ah oo aad ku qaadan karto laptop-kaaga, oo awood u leh inaad ku soo dallacdo taleefankaaga casriga ah oo aad ku xidhi karto dhagahaaga.
Huawei Mate 20 Lite waa rasmi: shaashadda 6.3 ″, Kirin 710, batari 3.750 mAh iyo in ka badan
Huawei Mate 20 Lite hadda waa rasmi. Ka baro wax kasta oo ku saabsan nooca taleefanka cusub ee nooca 'kirin 710 processor' shirkadda.
Maalin wanaagsan oo loogu talagalay astaanta taleefanka Faransiiska ee 'Android' oo lagu soo bandhigayo IFA ee Wiko Harry 2 iyo Wiko View 2 Plus.
Vivo X23 ayaa ku daatay AnTuTu oo leh Snapdragon 670
Vivo X23 ayaa hadda soo martay AnTuTu noasna wuxuu shaaca ka qaaday astaamahiisa muhiimka ah. Ka baro wax badan oo ku saabsan qalabkan dhexdhexaadka ah.
Kirin 980: processor-ka ugu awoodda badan shirkadda Huawei hadda waa rasmi
Huawei wuxuu soo bandhigayaa Kirin 980, oo ah processor-kiisa ugu awoodda badan. Ka raadi dhammaan waxyaabaha ku saabsan processor-ka cusub ee dhamaadka-sare lagu soo bandhigay IFA 2018.
Alcatel 3T 8: Kiniinkii ugu horreeyay ee Android Go ee suuqa
Alcatel 3T 8: Caddaymaha kiniinka ugu horreeya ee leh Android Go. Raadi wax badan oo ku saabsan kiniinka ugu horreeya ee suuqa leh Android Go.
Ma ciyaari karo fiidiyowyada Netflix HD ee Pocophone F1
Pocophone F1 kuma ciyaari karo fiidiyowyo HD ah Netflix. Wax badan ka ogow warkan oo shaaca laga qaaday saacadihii la soo dhaafay.
Wiko View 2 Go: Xaddiga soo-galinta leh darajo iyo 4.000 mAh baytariga
Wiko View 2 Go: qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Ka ogow wax badan oo ku saabsan astaanta-dhamaadka-cusub ee lagu soo bandhigay IFA 2018.
Sawirada dhabta ah ee Google Pixel 3 waa la sifeeyaa
Shaandheeyey sawirradii ugu horreeyey ee dhabta ah ee Google Pixel 3. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan naqshadeynta cusub ee dhammaadka sare ee Google ee imaaneysa Oktoobar
Casio Pro Trek WSD-F30: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Daahfurka. Raadi wax walba oo ku saabsan smartwatch-kan adag ee lagu soo bandhigay IFA.
Motorola Moto One: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi dhammaan wixii ku saabsan Motorola-kii ugu horreeyay ee leh Android One oo ah nidaamka hawlgalka.
Sharaf Magic 2: Sharafta sare-dhamaadka sare ayaa lagu dhawaaqay. Raadi wax badan oo ku saabsan ku dhawaaqista taleefanka cusub ee Shiinaha.
Sawirkii ugu horreeyay ee Xiaomi Mi Mix 3 waa kan
Shaaciyey sawirka rasmiga ah ee ugu horreeya ee Xiaomi Mi Mix 3. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan naqshadeynta dhammaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha ee timaadda deyrta.
Ogeysiis cusub oo ku saabsan Galaxy Note 9 halkaasoo uu ku amaanayo waxyaabaha cusub ee waaweyn
Laga soo bilaabo Ogosto 24-keedii, dhammaan adeegsadayaasha doonaya inay ku raaxaystaan ​​Samsung Galaxy Note 9 cusub ayaa hadda ...
ZTE ayaa hadda ku dhawaaqday Axon 9 Pro, oo ah calankeeda cusub. Ka baro wax walba oo ku saabsan terminal-dhamaadka sare shirkadda Shiinaha.
BlackBerry Key2 LE wuxuu halkaan kula jiraa kumbuyuutar QWERTY jireed ah si uu isaga fogeeyo tartanka
BlackBerery Key 2 Le waa terminal leh bartilmaameed adeegsade aad u sax ah adoo isku daraya kumbuyuutar jireed iyo dareeraha faraha ee ku yaal furaha booska.
Qiimaha iyo helitaanka Ciyaarta Sharafta ee Spain
Honor wuxuu shaaciyay qiimaha iyo helitaanka Ciyaarta Sharafta leh ee Isbayn. Waxbadan ka baro warkan dhowaan la shaaciyey.
Pocophone F1 ayaa lagu iibiyaa shan daqiiqo gudahood Hindiya
Pocophone F1 ayaa lagu iibiyay shan daqiiqo oo kaliya gudaha Hindiya. Raadi wax badan oo ku saabsan iibka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha ee Hindiya.
Sony Xperia XZ3: Shirkadda cusub ee Sony
Sony Xperia XZ3: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi wax walba oo ku saabsan Sony-dhamaadka sare ee lagu soo bandhigay IFA 2018.
HTC U12 Life: Nooca cusub ee bartamaha
HTC U12 Life: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Ka hel wax walba oo ku saabsan bartamaha-dhexe cusub soo saaraha Taiwanese.
The OnePlus 5 iyo 5T waxay helayaan qaab sawir ah oo sawir qaadasho ah oo ku saabsan beta-keeda cusub
Beta-ka cusub ee OxygenOS wuxuu yimaadaa OnePlus 5 iyo 5T. Ka raadi wax badan oo ku saabsan beta-ka cusub ee gaadha dhamaadka-sare warar.
Macluumaadka iyo noocyada kala duwan ee Sony Xperia XZ3 ayaa la daadiyay kahor intaan la bilaabin
Xperia XZ3 waxay ku soo muuqataa daadinta waqti yar ka hor intaan Sony si rasmi ah u soo bandhigin, wuu ogyahay tilmaamaha iyo midabada
Vivo X23 waxaa lagu bilaabi doonaa seddex midab oo kala duwan
Vivo X23 wuxuu ku dhufan doonaa dukaamada saddex midab oo kala duwan. Raadi wax badan oo ku saabsan midabada taleefanku ku bilaabi doono.
Inta badan saacadaha ayaa cusbooneysiin doona nooca cusub ee Wear OS
Nooca cusub ee Wear OS ayaa gaari doona saacadaha badankood. Soo ogow moodooyinka ku heli doona cusbooneysiinta noocaan cusub.
Vivo V11 Pro waxaa lagu muujiyay bogga shirkadda kahor intaan la bilaabin
Vivo V11 Pro ayaa hada lagu shaaciyay websaydhka rasmiga ah ee shirkada kahor intaan la bilaabin, taas oo loo qorsheeyay 6da Sebtember.
Google waxay cusbooneysiineysaa wear OS interface
Wear OS ayaa lagu cusbooneysiiyay interface cusub. Soo ogow isbeddelada ay Google ku soo bandhigeyso is-dhexgalka nidaamka qalliinka saacadda.
Huawei waxaa loo xaqiijiyay inuu yahay soosaaraha labaad ee taleefannada casriga ah ee adduunka oo dhan
Bilowgii Ogosto, Apple iyo Huawei labaduba waxay soo bandhigeen tirooyinka iibka rasmiga ee rasmiga ah ee wareegga labaad ...
Dib u eegista OUKITEL K8
Waxaan tijaabinay OUKITEL K8, oo ah taleefan casri ah oo qiimo jaban leh oo leh shaashad 6-inch ah iyo labo kamarad leh astaamo aad u sareeya oo kayar € 150. Mudan?
AGM X3 waa rasmi: taleefan qafiif ah oo leh Snapdragon 845
AGM X3 waa rasmi oo leh Snapdragon 845 iyo shahaadooyin dhowr ah oo ka dhigaya wax walba caddeyn. Waxbadan ka baro taleefankan "aan la burburin karin"!
OUKITEL C12 Pro: Xadka cusub ee gelitaanka ee leh darajo
OUKITEL C12 Pro: Kala duwanaanta gelitaanka oo leh shaashad iyo kamarad labajibbaaran. Raadi dhammaan wixii ku saabsan taleefanka cusub ee OUKITEL ee imaan doona Sebtember.
ARCHOS Access 57: Taleefanka Android Go ee wata 4G
Gaaritaanka ARCHOS 57: Sooc, Qiime iyo Siideyn. Waxbadan ka baro taleefankan la socda Android Go ee suuqa.
HTC U12 Life wuxuu ku daatay Geekbench oo leh Snapdragon 636 SoC
HTC U12 Life waxay mareysaa Geekbench oo leh SD636. Baro wax badan oo ku saabsan xogta la shaaciyey ee bartamaha soo socda ee shirkadda.
La shaandheeyey sawirka rasmiga ah ee ugu horreeya ee Maamuuska 8X Max
Sawirkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee 'Honor 8X Max' waa kan. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta taleefanka cusub ee Shiinaha.
Huawei wuxuu soo bandhigayaa beta-ka Android 9.0 Pie ee loogu talagalay 9 taleefano
Huawei wuxuu ku dhawaaqay barnaamijka Android 9.0 Pie beta ee loogu talagalay 9 taleefano. Raadi wax badan oo ku saabsan barnaamijkan beta ee sumadda Shiinaha.
Sony waxay si rasmi ah u soo bandhigi doontaa dhowr taleefan oo ku yaal IFA 2018. Faahfaahin intaas ka badan ka ogow ku dhawaaqista shirkadda Japan oo ka socon doonta IFA.
Nubia Z18 waxaa lagu soo bandhigi doonaa tan bisha Sebtember ee soo socota 5, laga yaabee IFA ee Berlin, Jarmalka. Waxaan kuu fidineynaa warka!
Galaxy Note 9 wuxuu horey u soo maray gacmaha iFixit qoraalkaasna ma fiicneyn
Sida caadiga ah, mar kasta oo qalab cusub uu ku dhaco suuqa, ragga iFixit waxay helayaan cutub si ay u bilaabaan caloosha iyo Samsung Galaxy Note 9 ayaa horeyba u soo maray gacmaha iFixit, wuxuuna helay dhibco, oo la mid ah kuwii hore, 4 ka baxsan 10
Nooca ugu dambeeya ee MIUI 10 wuxuu bilaabmayaa inuu soo baxo
Nooca ugu dambeeya ee MIUI 10 wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado Xiaomi Mi 6. Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan imaatinka nooca ugu dambeeya ee lakabka qaabeynta.
Galaxy Tab S4 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Samsung Galaxy Tab S4 hadda waxaa laga heli karaa Spain. Kiniiniga cusub ee dhamaadka sare ee sumadda Kuuriya ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain.
LG G7 Mid: LG Taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee Android
LG G7 Mid: Taleefankii ugu horreeyay ee LG ee wata Android One oo ah nidaamka qalliinka. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefankan cusub magaca Kuuriya.
Waxay soo bandhigtay liiska buuxa ee waddamada Pocophone F1 laga bilaabi doono
Horey ayaa loo ogaa waddamada Pocophone F1 laga soo saari doono. Raadi wax badan oo ku saabsan waddamada aad ka iibsan karto dhammaadka-dhamaadka.
Hadda waad keydin kartaa Oppo Find X ee Isbaanishka
Oppo Find X waxaa horey loogu heley boos ahaan sedex dukaan oo internetka ah oo kuyaala Spain: Media Markt, FNAC iyo El Corte Inglés.
Huawei Mate 20 Lite hadda waa la iibinayaa: qeexitaannada farsamada iyo qiimaha
Huawei Mate 20 Lite ayaa hadda lagu iibiyay dukaan internet oo asal ahaan ka soo jeeda Poland. Ogow qeexitaankiisa iyo qiimaheeda!
Galaxy S10 wuxuu shaashadda ku yeelan doonaa shidma raadka faraha
Dhamaan seddexda Galaxy S10 waxay lahaan doonaan shaashad shaashadda shaashadda ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan muuqaalka guud ee Samsung-dhamaadka sare ee cusub.
POCO F1 waxaa laga bilaabay Spain: Qiimaha iyo helitaanka
Pocophone F1 waxaa laga bilaabi doonaa Spain 30 Ogosto. Soo ogow taariikhda bilowga ee dhamaadka sare ee Spain si rasmi ah.
Kirin 980 wuxuu bilaabi doonaa rarka rubuca soo socda
Huawei waxay bilaabi doontaa rarka Kirin 980 rubucii ugu dambeeyay. Raadi wax badan oo ku saabsan imaatinka hawshan Huawei suuqa.
Pocophone F1 wuxuu maanta ka bilaabmayaa Faransiiska, Indonesia iyo Hong Kong
Pocophone F1 waxaa laga iibsan karaa Faransiiska laga bilaabo maanta. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilawga-dhamaadka sare ee sumadda cusub ee Shiinaha.
AGM X3 wuxuu marayaa TENAA: naqshadeynta iyo qeexitaannada la muujiyay
AGM X3 ayaa kaliya ku daatay TENAA oo ay weheliso sawiradeeda iyo qeexitaankiisa farsamo. Wax walba ka baro taleefannadan casriga ah ee soo socda.
Naqshadaynta LG V40 ayaa ku daatay fiidiyowga
Ku daatay fiidiyowga qaabeynta LG V40. Raadi wax badan oo ku saabsan naqshadeynta dhammaadka-dhamaadka sare ee shirkadda Kuuriya oo imaan doonta deyrta.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Maamuuska 8X Max
Maamuus 8X Max: Faahfaahinta koowaad ayaa xaday. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bartamaha dhexe ee noocyada Shiinaha ee la soo bandhigi doono bisha Sebtember.
Samsung Galaxy J5 (2017) wuxuu bilaabaa inuu helo Android 8.1 Oreo
Galaxy J5 (2017) wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android 8.1 Oreo. Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta taleefanka sumadda Kuuriya.
Vodafone Smart N9 Lite: Android 8.1 Go mobiil ah qiime aad u jaban
Vodafone ayaa hadda ka bilowday Isbaanishka Smart N9 Lite. Ka raadi dhammaan faahfaahinta ku saabsan taleefankan cusub ee leh Android 8.1 Go!
Magisk mar dambe kama shaqeyn doono taleefannada Huawei
Magisk wuxuu joojiyaa ka shaqeynta taleefannada Huawei. Raadi wax badan oo ku saabsan go'aanka sumadda Shiinaha ee joojinta barnaamijka.
Motorola One Power gebi ahaanba waa la dusiyay
Shaandheeyay qeexitaanka buuxa ee Motorola One Power. Ka hel wax walba oo ku saabsan taleefanka ugu horreeya ee Motorola ee leh Android One
Saddex maalmood ka dib markii la bilaabay, qeexitaannada farsamo ee Realme 2 ayaa la soo daadiyay
Terminalka xiga ee Realme, Realme 2, ayaa gebi ahaanba la daadiyay. Ogow dhammaan astaamaheeda iyo qeexitaankiisa farsamo!
Vivo V11 Pro wuxuu bilaabi doonaa Sebtember 6
Vivo V11 Pro waxaa si rasmi ah loo bilaabi doonaa Sebtember 6. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taleefanka cusub ka raadi sumadda Shiinaha ee dhowaan soo socota.
Geekbench wuxuu xaqiijinayaa astaamo dhowr ah oo ah ZTE Axon 9 Pro
Qeexitaanada farsamo ee ZTE Axon 9 Pro, sida processor-ka iyo RAM, ayaa waxaa shaaca ka qaaday Geekbench. Baro dhammaantood!
Sawirkii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Sony Xperia XZ3 waa la sifeeyey
Sawir dhiirrigelin ah oo loo yaqaan 'Sony Xperia XZ3' ayaa na soo gaadhay, isagoo xaqiijinaya warar dhawr ah oo beeninaya kuwa kalena beeninaya
Oppo waxay ku shaqeyneysaa taleefankeedii ugu horreeyay ee 5G
Oppo waxay ku shaqeyneysaa taleefankeedii ugu horreeyay ee 5G. Ogow dhammaan faahfaahinta ku saabsan mashruucan shirkadda.
Huawei Mate 20 iyo Mate 20 Pro ayaa la imaan doona Android Pie
Huawei Mate 20 wuxuu yeelan doonaa Android Pie asal ahaan. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka hawlgalka ee taleefannada cusub ee Huawei yeelan doonaan.
5 kamaradaha, oo aan ka badnayn ama ka yarayn, kuwa ka muuqda sawirka ugu horreeya ee LG V40
LG V40 ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Nofeembar waxaana hadda imanaya sawirkii ugu horreeyay ee iftiiminaya tirada kamaradaha: kaliya 5.
Sidan ayaa loo sameeyaa Samsung Galaxy Note 9
Sida saaxiibkay Eder idin xusuusiyey, maanta Samsung Galaxy Note 9 ayaa si rasmi ah loo iibinayaa, Terminal aysan Samsung doonaynin Samsung ayaa soo dhigtay fiidiyoow websaydhkeeda oo aan ku arki karno qayb ka mid ah hannaanka wax soo saar ee Samsung Galaxy Note 9.
Qaar badan ayaa ah dadka isticmaala ee caadeysta inay bedelaan muuqaalka asalka ah ee terminaalyadooda, daal dartiis, ama si fudud maxaa yeelay waxay rabaan inay taabtaan. iyaga u gaar ah si aad casriga ah.
Galaxy Note 9 waxaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista shirkadda Samsung ee heerka sare ka joogta Spain.
HTC U12 Plus waxay heleysaa cusbooneysi cusub oo leh dhowr horumarin oo ku saabsan ismaamulka iyo qaybta waxqabadka guud. Dheeraad ah, waxay la timaaddaa CryptoKitties!
Badhanka Bixby laguma naafoobi karo Galaxy Note 9
Kama shaqeyn kartid badhanka Bixby ee ku yaal Galaxy Note 9. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan go'aankan muranka dhaliyay ee Samsung.
Galaxy J2 Core: Samsung Taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee Android
Galaxy J2 Core: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi dhammaan wixii ku saabsan telefoonka ugu horreeya ee Samsung ee leh Android Go sida nidaamka hawlgalka.
Wiko Sunny3 iyo Sunny3 Mini: Dhamaadka-dhamaadka leh Android Go
Wiko Sunny3 iyo Sunny3 Mini: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka-hoose ee leh Android Go oo ah nidaamka hawlgalka.
OPPO R17 Pro: Calaamadaha cusub ee sumadda
OPPO R17 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista rasmiga ah. Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub nooca Shiinaha ee maanta la soo bandhigay.
Kuwani waa shan kiniin oo Lenovo ah: E7, E8, E10, M10 iyo P10. Kiniinno kala duwan oo leh qaabab kala duwan iyo dhammaan noocyada jeebabka.
Doogee S70: taleefankii ugu horreeyay ee qallafsan ee suuqa ku yaal ayaa rasmi ah
Doogee S70 durba waa rasmi wuxuuna la yimaadaa astaamo iyo tilmaamo aad u xiiso badan. Baro wax walba oo ku saabsan moobiilka ugu horreeya ee rooga adduunk